ဤထုတ်ကုန်ကို စျေးဝယ်လှည်းသို့ အောင်မြင်စွာ ထည့်ခဲ့သည်။
Shopping သို့ ပြန်သွားရန် ငွေရှင်းရန်ဆက်လုပ်ပါ
Alibaba ပေးသွင်းသူ ကျောက်တုံးပန်းပင် အမှတ်အသား ဥယျာဉ်တံဆိပ်
စိတ်ကူးဖြင့် ဖန်တီးထားသော သဘာဝ ကျောက်တုံးနံရံ ဓာတ်ပုံဘောင်
စျေးသက်သာသော လက်ကား ကျောက်တုံး ကျောက်အပင်တံဆိပ် Stainle...
နှလုံးသားပုံသဏ္ဍာန် ကျောက်တုံးတံဆိပ်များ အပင်အမှတ်အသား သစ်ပင်တံဆိပ် ဂျိ...
နမူနာအခမဲ့လက်ကားအဖြူရောင်စကျင်ကျောက်သစ်သား coaster Eco-...
စက်ရုံ အရည်အသွေးမြင့် စကျင်ကျောက် သစ်သားဓာတ်ပုံဘောင် High ...
ပုဇွန်ထုပ်/အညိုရောင်သေတ္တာ/လက်ဆောင်သေတ္တာ ထုပ်ပိုးထားသော ကျောက်တုံးကျောက်ခဲများ...
Slate plate slate ခုတ်ထစ်ဘုတ် Factory အရောင်း W...
တရုတ်စက်ရုံမှ စိတ်ကြိုက် စကျင်ကျောက်နှင့် သစ်သားချိစ်များ လက်ကား...
လူကြိုက်အများဆုံး ရှေးဟောင်းအလှဆင် ဇိမ်ခံ DIY Modern Ha...
တရုတ်စက်ရုံ Cosen တိုက်ရိုက်လက်ကား2Tier Slate Ca...
Tasting Plate ပန်းကန်ခွက်ယောက် လက်လုပ် လက္ကား ကျောက်ပြားများ
အိမ်နှင့် ဥယျာဉ် လက်မှုပညာ အစားအစာ ဖန်စီ စကျင်ကျောက် အချိုပွဲ...
စက်ရုံမှ လက္ကား သဘာဝ အနက်ရောင် ချိစ်ဘုတ်...
စိတ်ကြိုက် အံဝင်ခွင်ကျ အလှဆင်ထားသော အဝိုင်းအလှကုန် Jewe...
Cooper ဖြင့် သဘာဝအစွန်း Hexagon Slate Serving Tray...
လက္ကားအတွက် သဘာဝ အနက်ရောင် ကျောက်တုံးချိစ်ဘုတ်
ထိပ်တန်းရွေးချယ်မှု D အတွက် ဇိမ်ခံစတုရန်းမာဘယ်လ်သစ်သား Coaster
စဉ်ဆက်မပြတ်၊ စတော့ရှယ်ယာ၊ Eco-friendly
Jiangxi, China, Jiangxi, China (ပြည်မ)
အစားအသောက် အဆက်အသွယ် လုံခြုံသည်။
အတိုင်းအတာ- Φ39.9×13စင်တီမီတာ သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်
အပြီးသတ်- ကြမ်းတမ်း/ဖြတ်တောက်ထားသော အစွန်းများ၊ သဘာဝ မျက်နှာပြင်
လိုဂို- လေဆာ/ စီစကရင်/ UV ပုံနှိပ်ခြင်း။
ပို့ဆောင်ချိန်: ရက် 30
ငွေပေးချေမှုစည်းမျဉ်းများ-T/T သို့မဟုတ် L/C
မေး- သင့်မှာ ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံရှိလား။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျောက်တုံးတူးဖော်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းများတွင် အတွေ့အကြုံ 10 နှစ်ကျော်ရှိသော စက်ရုံဖြစ်သည်။
မေး- မင်းရဲ့စက်ရုံက ဘယ်မှာလဲ။
A: ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင် 21044.28 ကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ စတုရန်း မီတာများသည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ပထမအဆင့်ရှိ ကျောက်တုံးများ အရန်နေရာဖြစ်သည့် Jiujiang၊ Jiangxi ပြည်နယ်၊ Xingzi၊ Jiujiang တွင် တည်ရှိသည်။
A: ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာ Mining License and အလုပ်ဘေးကင်းရေးလိုင်စင် သတ်မှတ်ထားသော ကျောက်တိုင်လေးခုတွင်၊
မေး- သက်ဆိုင်ရာ အောင်လက်မှတ် ရှိပါသလား။
A: ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် TUV မှစစ်ဆေးသော BSCI ကိုအောင်မြင်ပြီးဖြစ်သည်။ ပန်းကန်ခွက်ယောက်များ စုဆောင်းခြင်းသည် 84/500/EEC နှင့် 2005/31/EC၊ LFGB နှင့် အစားအစာထိတွေ့မှု ဘေးကင်းပါသည်။
မေး- မင်းရဲ့စက်ရုံမှာ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ဘယ်နှမျိုးလဲ။ မင်းရဲ့စက်ရုံရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲ။
A- အဓိကအားဖြင့် လေးမျိုးတွင် ထမင်းစားခြင်း၊ နေထိုင်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များ၏ အကျိုးခံစားခွင့်ကို ဂရုစိုက်ပြီး လွန်ခဲ့သည့် 10 နှစ်အတွင်း 0% တိုင်ကြားချက်အတွက် ဂုဏ်ယူပါသည်။
Q: မင်းရဲ့နမူနာကို အရင်ကြည့်လို့ရမလား?
A: ဟုတ်ပါတယ်။ သင်၏အကဲဖြတ်မှုအတွက် အခမဲ့နမူနာကို ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခကောက်ခံရန် ကျွန်ုပ်တို့ ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ အပိုင်းအားလုံးကို သဘာဝကျောက်ပြားဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ကြမ်းတမ်းသော သို့မဟုတ် ဖြတ်တောက်ထားသော အစွန်းများဖြင့် လက်ဖြင့် ပြီးသွားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ချပ်ပြားများသည် ပုံသဏ္ဍာန်၊ ပုံသဏ္ဍာန်၊ အရောင်အဆင်းအားဖြင့် ထူးခြားသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ အပိုင်းနှစ်ပိုင်း တူညီမည်မဟုတ်ပါ။
မေး- ကျောက်တုံးက ပျက်စီးလွယ်ပါသလား။ ပြုတ်ကျရင် ကွဲသွားမှာလား။
A- ကြွေထည် သို့မဟုတ် ဖန်ကဲ့သို့ မာကျောမှု။ ပုံမှန် 5-6 မီလီမီတာ စလစ်ပြားဘုတ်သည် ၎င်း၏အပေါ်ဘက်တွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အလေးချိန်ထက် အဆများစွာရှိနိုင်သည်။ ဒါကြောင့် ပါးလွှာပြီး လွယ်လွယ်နဲ့ မဖြတ်နိုင်ပါဘူး။သို့သော် ပြင်းထန်သော အရာတစ်ခုမှ ထိမှန်လျှင် သို့မဟုတ် ကြမ်းတမ်းသော မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ပြုတ်ကျပါက ကွဲသွားနိုင်သည်။ မင်းရဲ့ မီးဖိုချောင်သုံးပန်းကန် ဒါမှမဟုတ် ဖန်ခွက်လို ဆက်ဆံရင် လုံးဝကောင်းသွားလိမ့်မယ်။.
Q: ကျောက်တုံးကို ဘယ်လို သန့်စင်မလဲ။
A- စိုစွတ်သောရေမြှုပ် သို့မဟုတ် သန့်စင်ဆေးရည်ဖြင့် အလွယ်တကူ သုတ်ပေးပါ။ အောက်ခြေမှာ EVA ခြေထောက်မပါရင် ပန်းကန်ဆေးစက်က ဘေးကင်းပါလိမ့်မယ်။
မေး- slate မှာ ဘယ်လိုအင်္ဂါရပ်တွေရှိလဲ။
A- Slate သည် လွန်ခဲ့သော နှစ်သန်းပေါင်း 200 ကျော်က ကမ္ဘာမြေကြီးတွင် တည်ရှိသော အလွန်အကြမ်းခံသော ကျောက်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြင်ပအခြေအနေများအတွက် ရေကို စုပ်ယူမှု အလွန်နည်းပါးသော ပမာဏဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ပါးလွှာသောဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူ၎င်းသည်အလွန်အကြမ်းခံပြီးခိုင်ခံ့သောကြောင့်၎င်းအားချိစ်ဘုတ်များ၊ အုတ်ချပ်များ၊ ပန်းကန်ပြား၊ အစားအစာဝိုင်းပုံစံချစ်သူများနေ့ပန်းကန်၊ ခွက်ကော်စတာကဲ့သို့သောပန်းကန်ခွက်ယောက်များတွင်အသုံးပြုသည်။
မေး- ကျောက်တုံးကို ဘယ်လိုပြုစုမလဲ။
ဖြေ- မင်းရဲ့ကျောက်ပြားဘုတ်ပြားကို နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ထိန်းသိမ်းထားဖို့အတွက် တွင်းထွက်ဆီကောင်းတစ်စက် ဒါမှမဟုတ် နှစ်စက်နှစ်စက်လောက်နဲ့ တစ်နှစ်ကို နှစ်ကြိမ်လောက် သုတ်ပေးပါ။ တွင်းထွက်ဆီသည် ကျောက်တုံးများ၏ ခိုင်မာမှုကို ကာကွယ်ပေးပြီး အနည်းငယ် ပွတ်တိုက်သောအသွင်ကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ မီးဖိုနှင့် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်များ မရှိသည်ကို သတိထားပါ။သင့်လျော်သည်။.
ယခင်- နမူနာအခမဲ့ 2020 အသစ်လက်ကား စကျင်ကျောက် သစ်သားချိစ်ဘုတ် ဓားစကျင်ကျောက် ချိစ်ဘုတ်ဖြတ်တောက်ခြင်း Servng board ညစာပန်းကန် အိမ်သုံးပစ္စည်း
နောက်တစ်ခု: Alibaba ပေးသွင်းသူ ကျောက်တုံးပန်းပင် အမှတ်အသား ဥယျာဉ်တံဆိပ်
Dinnerware Kitchen Mini စိတ်ကြိုက် Cheese Board နှင့်...
Food Grade Fashionable Round Bamboo သောက် Coaster ပါ။
စိတ်ကြိုက် အံဝင်ခွင်ကျ အလှဆင်ထားသော အဝိုင်းအလှကုန်...
စက်ရုံတွင် သိုလှောင်ထားသော သဘာဝကျောက်တုံးနှင့် အကာရှ...
နောက်ဆုံးပေါ် Fashion Craft Square Natural Bamboo Tea...
မင်္ဂလာပွဲ ပန်းကန်ခွက်ယောက် Mini သဘာဝကျောက် အနက်ရောင် ပြားပြား...
စက်မှုပန်းခြံ၊ Lushan မြို့၊ Jiujiang၊ Jiangxi၊ တရုတ်နိုင်ငံ